मोबाइल : फेसन कि बाध्यता - परिक्षण - नारी
नेपालमा केही वर्ष अगाडि मात्र मोबाइल कल्पना थियो तर आज मोबाइल नबोक्ने कमै होलान् । यतिखेर मोबाइल र मानव पूरक समेत बन्न पुगेको पनि छ । विगत केही वर्षदेखि त यसले एक प्रकारको क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । मोबाइललाई कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ त ? गरौं परीक्षण :
१. अस्पतालमा बिरामीसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ । यतिखेरै तपाईंको मोबाइल घन्टी बजे
(क) बिरामीसँग गफ गर्दै मोबाइल पनि रिसिभ गर्नुहुन्छ ।
(ख) बिरामीसँग माफ माग्दै वार्डबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ ।
(ग) मोबाइलको घण्टी कट गरी अर्कोपटक पनि आउला कि भनी स्वीच अफ गर्नुहुन्छ ।
(घ) वार्डमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै स्वीच अफ गर्नुहुन्छ ।
२. कतै सपिङमा जाँदा कुनै चीज तपाईंलाई एकदम मन पर्‍यो । एकपटक श्रीमानसँग पनि सल्लाह गर्न मन लाग्यो । साथमा तपाईंसँग मोबाइल पनि छ भने ......
(क) काउण्टर वा अरु ग्राहकको सामुन्ने एकदम कराउँदै फोन गर्नुहुन्छ ।
(ख) सेल्स गर्लसँग के म आफ्नो श्रीमानसँग सामानको बारेमा सल्लाह लिन सक्छु भन्दै पसल बाहिर गई मोबाइल गर्नुहुन्छ ।
(ग) सबैको सामुन्ने श्रीमानसँग मोबाइलमा गफ गर्न लाज मान्नुहुन्छ ।
(घ) श्रीमानसँग गफ गरी सामानको भाउमा वार्गेनिङ गर्नुहुन्छ ।
३. तपाईंको श्रीमान्लाई समेत एउटा साथीको विवाहको निम्तो आयो र त्यहाँ जानुभयो । एकदम घुइँचो थियो तर पनि चिनेको एकजना पनि त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । त्यही भीडभाडमा तपाईंको मोबाइलको घण्टी बजेमा ।
(क) सबैजना अपरिचित भएकोले मोबाइलमा पनि चिच्याउँदै गफ गर्नुहुन्छ कि ।
(ख) बिस्तारै गफ गर्नुहुन्छ, किनकि उपस्थित सबैले तपाईंलाई नै हेरिरहेका हुन्छन् ।
(ग) फोन गर्नेलाई विनम्रतापूर्वक विवाहको निम्तोमा छु, पछि आफैं कल गर्छु भन्नुहुन्छ ।
(घ) फोनमा त्यहाँ भएको विवाहको गतिविधि बताउन चाहनुहुन्छ ।
४. कार ड्राइभ गरी अफिस जाँदै हुनुहुन्छ । अचानक अफिसबाट तपाईंलाई साथीले फोन गर्दै एउटा जरुरी फाइलको बारेमा सोधेको खण्डमा के गर्नुहुन्छ ?
(क) म अफिस आउँदै छु । अफिसमा नै आएर कुरा गरौंला भन्नुहुन्छ ।
(ख) बाटोमा नै मोबाइल मार्फत् बताउँदै कारलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्न ।
(ग) घण्टी बजिरहँदा पनि मोबाइल रेस्पोन्ड नै गर्नुहुन्न ।
(घ) मुख बिगार्दै मोबाइलको घण्टी काट्नुहुन्छ ।
५. एक हप्तासम्म एकदम बेफुर्सदमा समय बित्छ । एकदिन छुट्टी पाउँदा श्रीमान् तथा छोराछोरीसँग बस्न पाउँदा
(क) मोबाइलको स्वीच बन्द गर्नुहुन्छ ता कि मोबाइलले पनि डिस्टर्ब नगरोस् ।
(ख) मोबाइललाई भ्वाइस मेलमा राखी म्यासेज आउँछ कि भनी पर्खनुहुन्छ ।
(ग) सधैं झैं मोबाइल अन नै गरी राख्नुहुन्छ, रिसिभ पनि गर्नुहुन्छ ।
(घ) मोबाइल अन नै राखे पनि कल रिसिभ चाहिं गर्नुहुन्न ।
६. हाकिमसँग जरुरी मिटिङमा बसेका बेला तपाईंको मोबाइलमा रिङ टोन बजे ....
(क) मोबाइलको भोल्युम म्युट गर्नुहुन्छ ।
(ख) तुरुन्त स्वीच अफ गर्नुहुन्छ ।
(ग) हाकिमसँग माफ मागी कोठा बाहिर निस्केर फोन रिसिभ गरी पछि फोन गर्ने वाचा गर्नुहुन्छ ।
(घ) कोठामा पस्ने बेलामा मोबाइलको स्वीच बन्द गर्नुहुन्छ ।
७. ड्राइभमा जाँदा प्राय:
(क) मोबाइलको स्वीच अफ गर्नुहुन्छ ।
(ख) मोबाइलको भोल्युम म्युट गरी ड्राइभिङ सकेपछि फोन गर्ने व्यक्तिलाई पुन: सम्पर्क गर्नुहुन्छ ।
(ग) इयर फोन लगाएर मोबाइल रिसिभ गर्दै ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ ।
(घ) केही वास्ता नै गर्नुहुन्न ।
८. जो कसैलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईंको मोबाइलको नम्बर मागेमा....
(क) आफ्नो मोबाइलको नम्बर दिँदै यो व्यक्ति पनि कुनै बेला काम लाग्छ भन्नुहुन्छ ।
(ख) आफ्नो बिजनेसको फाइदाको लाग पनि आफ्नो मोबाइलको नम्बर नदिई अफिसको नम्बर दिनुहुन्छ ।
(ग) विनम्रतापूर्वक मोबाइल नम्बर दिन इन्कार गर्नुहुन्छ ।
(घ) यो मोबाइल मेरो श्रीमान्ले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ । मेरो पर्सनल मोबाइल नै छैन भन्नुहुन्छ ।
क २ २ ० ५ ५ ० ५ ०
ख ४ ५ २ २ ३ ५ ३ ३
ग ३ ० ५ ३ २ ३ २ ५
घ ५ ४ ३ ० ४ २ ४ ४
३५ देखि ४० नम्बर ल्याउनुभएको छ भने तपाईंले मोबाइल बोकेको पनि सुहाउँछ र तपाईंलाई राम्रो र सफल गृहिणी वा सर्भिस होल्डरको रुपमा लिन सकिन्छ ।
२५ देखि ३५ नम्बर ल्याउनु भएको छ भने तपाईं अनुकरणीय व्यक्तिको रुपमा लिन नसके पनि तपाईंलाई मोबाइल प्रयोग गर्न आए पनि यसको महत्त्वबारे चाहिं कमै मात्रामा ज्ञान छ ।
१५ देखि २५ नम्बर मात्र ल्याउनुभएको छ भने तपाईंले मोबाइल बोक्नुभएको छ तर सदुपयोग गर्न भने जान्नुभएको छैन । यसलाई सही पहिचान गर्नु गराउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
१० नम्बरभन्दा पनि कम ल्याउनुभएको छ भने तपाईंले अरुको देखासिकी र रहरले मात्र मोबाइल बोक्नुभएको हो । त्यसैले मोबाइल नबोक्नु नै राम्रो देखिन्छ ।